Tijaabooyinku waxay muujinayaan xeeladda ugu fiican ee nematicides loogu isticmaalo baradhada
в Agrotechnology, Isbeddellada / Isbeddellada
Sida laga soo xigtay cilmi-baaris ay sameeyeen Solutions Produce Solutions, koox ka mid ah beeraleyda baradhada, habka isdaba-joogga ah ee isticmaalaya nematocide dareere ah oo leh hab cusub oo ficil ah, oo ay weheliso alaabta granular ee jirta, waa istaraatiijiyada ugu fiican ee lagu xakameynayo cyst nematode baradho.
Shirkaddu waxay saddex sano ku qaadatay inay tijaabiso Velum Prime (fluopyram) ee Shropshire, iyada oo adeegsanaysa kaligeed iyo si isdaba joog ah nematocides-ka granular ee heerar kala duwan. Shirkaddu hadda waxay haysaa sawir cad oo ku saabsan meesha ay ku leedahay istaraatiijiyadaha xakamaynta baradhada cyst nematode (PCN) iyo kharashyada la xidhiidha.
Agronomist James Lee, oo kormeeray tijaabooyinka, shaqadu waxay xaqiijisay in Velum Prime (fluopyram) aanu ahayn beddelka nemacides granular. "Saddex sano ka dib, waxaan aragnay in Velum Prime uu door muhiim ah ka ciyaaro buuxinta alaabada kale," ayuu yidhi. "Marka la eego, natiijooyinkayagu waxay la jaan qaadayaan waxa Bayer had iyo jeer sheegto."
Ilaa sannadkii hore, xakamaynta cayayaanka kiimikaad waxay ku salaysnayd isticmaalka nematides granular sida vidat (oxamil). Kadib waxa yimid Velum Prime gugii 2019, kaas oo ku salaysan SDHI fungicide fluopyram, oo ay yaqaanaan beeralayda sarreenka ee la dagaalama cudurada foliar sida septoria.
Tijaabada 2019, labadaba wax-soo-saarka ugu wanaagsan iyo heerka ugu sarreeya ayaa la helay iyadoo si joogto ah loo isticmaalayo Velum Prime iyo Vydate qiime buuxa halkii laga heli lahaa kala badh heerka granular. Habkani waxa uu keenayaa kharashyo kiimikaad oo la taaban karo xilliga hore ee beeralayda, badiyaa kharashka ugu badan ee ilaalinta dalagga.
"Qiimaha hore waa sarreeyaa, laakiin waxay ahayd doorashada ugu faa'iidada badan. Waxa uu keenay wax-soo-saarkii ugu sarreeyay iyo dakhligii ugu fiicnaa.
Tijaabooyinku waxay muujiyeen in noocyada nematode-ku ay yihiin kuwo gaar ah oo G pallida ah, oo leh tijaabo beerasho ka hor oo muujinaysa tirada ugu horreysa ee cyst 27/g ciidda. Goobaha laba saf, mid kasta oo dhererkiisu yahay 12 m, daawaynta ayaa lagu fuliyay iyadoo la adeegsanayo qalabka beeraha: Velum Prime ayaa lagu mariyay seeraha, iyo Vydate ayaa lagu dabaqay daaweynta sariirta.
"Dhammaan daawaynta waxay saameyn togan ku yeesheen koritaanka wax-soo-saarka iyo dhalidda kama dambaysta ah marka la barbar dhigo daawaynta aan la daweyn, taasoo muujinaysa xakamaynta nematode," ayuu raaciyay Mr. Li. Iyadoo faa'iidooyinka ilaalinta dalagga ee Velum Prime ay waxyar ka sarreeyaan Vydate markii la isticmaalay kaligiis, isticmaalkooda joogtada ah wuxuu keenay wax soo saar aad u sarreeya.
"Farqiga wax-soo-saarkan ayaa keligiis caddaynaya isticmaalka labadaba alaabooyinkooda si buuxda," ayuu ku nuuxnuuxsaday. "Xogta margin waxay sidoo kale xaqiijineysaa tan waxayna ka tarjumaysaa cadaadiska nematode ee dalagga." Haddii kale, faa'iidooyin nafsi ah oo cad ayaa lagu diiwaangeliyay dhammaan aagagga la daweeyay, iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan daaweynta maadada qalalan ama joogitaanka cilladaha gudaha.
Waxa kale oo jiray farqi yar oo u dhexeeya biqilka iyo korriinka daawaynta, iyada oo dhammaan ay gaadheen 50% biqilka 31 maalmood ka dib markii la beero. "Sida la filayo, dhulalka si fiican looga ilaaliyo nematode waxay la kulmeen dhir ka xoog badan sababtoo ah heerarka codsiga alaabta oo sarreeya."
Ciladda kaliya ee tijaabadu waxay ahayd falanqaynta ciidda ka dib goosashada waxay muujisay in saamiga u dhexeeya tirada hore ee ukunta (Pi) iyo tirada ugu dambeysa ee ukunta (Pf) aysan isbeddelin. “Tani waxay ahayd wax lala yaabo. Natiijooyinka agrotechnical waxay soo jeediyeen in meelaha aan la daweynin ay yeelan doonaan heerka isku dhufashada sare, laakiin uma badna inay korodho mid ka mid ah daawaynta. Ma naqaano si aan u sharaxno."
Velum Prime waa soo dhawayn lagu soo dhawaynayo hubka ka dhanka ah baradhada nematodes wuxuuna yimid waqtigii la rabay, wuxuu soo koobay James Lee ee Soo saarista Solutions.
Sababtoo ah mustaqbalka fog ee nematicides granular ma cadda, soosaarayaashu waa inay qaataan fursad kasta si ay u tijaabiyaan badeecad cusub oo ay u arkaan inay ku habboon tahay iyaga.
Tags: baradhada ka ilaalinta nematodesilaalinta dhirtanematicides
Khad cusub oo wax soo saar oo jiidis ah ayaa laga bilaabay xaafadaha
Waa maxay noocyo baradho ah oo aan ka baqaynin dab-dhac dambe?